Facial Toner သုံးသင့် မသုံးသင့် - Hello Sayarwon
အခုခေတ်မယ် များပြားလှတဲ့ skincare products တွေကြား ဘာကို ဘယ်လို သုံးရမှန်းမသိတဲ့ မေလေး တွေရှိကြလား။ အခု နှင်းပြောပြပေးမှာက မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့အခါ ဂွမ်းလေးနဲ့ မျက်နှာ အနှံ့ သုတ်လိမ်းပေးရတဲ့ facial toner လေး အကြောင်းပါပဲ။ ဒီ အဆင့်လေး ကို နှစ်ခြိုက်စွာသုံးစွဲနေကြတဲ့ မေလေးတွေရှိသလို မလိုဘူး ထင်ကြတဲ့ မေလေးတွေလည်း ရှိမှာပါ။ သုံးသင့် မသုံးသင့်ဆိုတာလည်း ကမ္ဘာ့အရေပြားဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေအကြား အငြင်းပွားနေကြဆဲပါ။
မေလေးတချို့က Toner ကို မသုံးလည်းရတယ်ဆိုပြီး မသုံးတတ်ကြပါဘူး။ Essence မှာ Toner effect ပါ ပါပြီးသားဆိုပြီး တစ်မျိုးတည်းပဲ သုံးတဲ့ မေလေးတွေလည်းတွေ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်က Essence ဆိုတာဟာ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့အဆင့်ပဲမို့ Toner သုံးပေးတာနဲ့တော့ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘာလို့ သုံးသင့်တယ် ယူဆ လဲ…. ဘာလို့ မသုံး သင့်ဘူး ယူဆလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ကလေးတွေ ကို နှင်းသိသလောက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Facial toner သုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးကို တစ်ချက်ချင်းစီ ယှဉ်ပြောပေးမယ်နော်။
မျက်နှာသစ်ဆေးတွေဟာ မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို အကုန် ပြောင်စင်အောင် လုပ်ပေးဖို့ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဖုန်တွေ၊ မိတ်ကပ် အကြွင်းအကျန်တွေ ကို သန့်စင်သွားဖို့ toner က စွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလို ပြောင်ချင်ဇောနဲ့ ဖိပွတ်ဆွဲတဲ့ အခါ အသားအရေ တင်းရင်းမှုကို လျော့ကျ စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့တွေက toner ကို လက်ထဲ ထည့်ပြီး ဖွဖွ ပုတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီလိုကျပြန်တော့ လည်း အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဂွမ်းလေးပေါ်တင်ပြီး အသာအယာပဲ လိုက်ဖိပွတ်ပေးရပါတယ်။ လက်ဆ မနိုင်တဲ့ မေလေးတွေကတော့ cleansing cream အရင်သုံး …အညစ်အကြေးအားလုံးကို cream နဲ့ဖျော်ထုတ်လိုက်ပြီး မျက်နှာသစ်ချ လိုက်… ပြီးမှ facial spray ဖြန်းပြီး အစိုဓာတ် ပြန်ဖြည့် ပေးလို့ရပါတယ်။ (၂ မျိုးဆိုတော့ budget အပို ထွက်တာမို့ toner ကိုပဲ ချိန်သုံး ရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်)။
ချွေးပေါက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေ အထိ သန့်စင်စေလို့ ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေနိုင်ပြီး အညစ်အကြေးကင်းစင်သွားတဲ့ မျက်နှာဟာ skin care ကို သေချာစုပ်ယူတာမို့ Toner သုံးပြီးမှ တခြားSkin Cares step တွေကို သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အာနိသင်ကို ပိုရစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ ၂ ခါထက်ပို သုံးရင်တော့ ချွေးပေါက်တွေ ပြန်ကျယ်လာနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာသစ်ဆေးသုံးလိုက်တဲ့အခါ အသားအရေရဲ့ Acidic pH level ကျသွားတတ်ပြီး အရေပြား ပိုးဝင်လွယ်ကာ sensitive skin ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အခါ မှာ toner ပြန်သုံးပေးခြင်းအားဖြင့် pH balance ကို ပြန်ညှိပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အဆီပြန်တတ်တဲ့ မေလေးတို့ အတွက်လည်း အဆီဓာတ် ထိန်းပေးပြီး အသားခြောက်တတ်တဲ့ မေလေးတွေ အတွက် ဆိုရင်တော့ အသားအရေရဲ့ အစိုဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ alcohol ပါတဲ့ toner တွေ အနံ့အရောင် တွေပါတဲ့ toner တွေကတော့ chemical ပါဝင်မှုများတဲ့ အတွက် အသုံးကြာလာရင် အသားအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အကျိုးနဲ့ပြောင်းပြန် အသားပိုခြောက်.. အဆီပိုထွက်… ဝက်ခြံပိုထွက် တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ alcohol free toner တွေ natural beauty water တွေ အများကြီးပေါ်လာပြီမို့ ဆိုးကျိုးတွေပိုနည်းသွားပြီဆိုပေမဲ့ chemical free တော့ မဖြစ်သေးတာမို့ ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေနဲ့ အရေပြားပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်သုံးစွဲကြဖို့ နှင်းက တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Toner မှာ ကိုယ့်အရေပြား အမျိုးအစားနဲ့ ပြဿနာအလိုက် အမျိုးမျိုးရွေးစရာတွေရှိပါတယ် ..
-အဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံထွက်တဲ့အသားရေ နဲ့ ဝက်ခြံထွက်လွယ်တဲ့အသားရေ တွေအတွက် ချွေးပေါက်မပိတ်အောင် သန့်စင်ပေးတဲ့ Toner – Salicylic acid or BHA , Glycolic acid or AHA ပါတဲ့ Cleansing and ExfoliatingToner
-ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ Hyaluronic acid ပါတဲ့ Toner
-အသားရေ ချောမွေ့စေတဲ့ Soothing & Calming လုပ်ပေးတဲ့ Toner ( ပန်းနဲ့လုပ်တဲ့ Toner တွေပေါ့ ! ဥပမာ rosewater လိုမျိုး)
-အသားရောင် ညှိပေးနိုင်တဲ့ Toning Toner
-အသားရောင်လင်းလက်တောက်ပစေမယ့် Vitamin C ပါတဲ့ Brightening Toner
-အရွယ်တင်ပြီး အရေးအကြောင်းလျော့ပါးစေမယ့် Antioxidants သို့ Retinol စတာတွေ ပါတဲ့ Antiaging Toner
စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့ မေလေးတို့ရေ။
Toner သုံးသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်းက ဘာများလဲ.......
ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ အဆင်ပြေမယ့် Toner ရွေးချယ်ရခက်နေလား
လေဒီလေးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ သဘာဝ Toner လေးတွေ